အဖမြန်မာပြည် တည်ထောင်ဖို့.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » အဖမြန်မာပြည် တည်ထောင်ဖို့..
Posted by kai on Feb 4, 2011 in Politics, Issues, Think Tank | 19 comments
Mizzima မှာသတင်းလေးတွေ့လိုက်တော့ေ၇းစရာတွေရှိတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
တရုတ်ပြည်ကြီးကလည်းနှစ်တော်တော်ကြာကတည်းက ဒါမျိုးလုပ်ဖူးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက် ဆယ်စုနှစ်တွေ ကျိုးကျတော့ အခုတရုတ်ပြည်ကြီးကို မြင်ရတာပါပဲ.။
မြန်မာတွေလည်း .ကမ္ဘာအနှံ့ ပြန်ကျဲရောက်နေကြတာပါ။ ပညာရေးဆက်လုပ်နေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒေါက်တာရိတ် အဆင့်တွေလည်းရှိပါတယ်.။ ဒီလိုလူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ပညာတွေ။ ငွေကြေးအရင်းအနှီးတွေ နဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး ပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့ အတွက် သုံးသင့်တာပေါ့..။
ဒီအတွက် .. သတိတရနဲ့ ဥပဒေတင်သွင်းပေးမဲ့ ဦးသိန်းညွန့်ကို ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒိကိစ္စကို ရွာသားတွေက နည်းနည်းတော့ ဆွေးနွေးပေးကြည့်ကြစေချင်တာပါပဲ..။
အမိမြန်မာပြည်ခမြာ .. လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက .. နှစ်တွေသာကြာလာတယ်.. ဒဏ်ရာတွေနဲ့ အဖွားအိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီမို့ … ဂျာမန်တွေလိုပဲ.. ခန့်ခန့်ငြားငြား.. အဖမြန်မာပြည် ရယ်လို့ ခေါင်းစဉ်ပြင်တပ်ထားလိုက်ပါတယ်..။
Package aims to entice high-flyers back home. – Jane Qiu
China has announcedanationwide plan that promises top salaries and attractive funding to elite researchers who are working overseas and willing to return to the country. The plan, known as the one-thousand-talents scheme, aims to boost China’s innovation capability. But critics say that its success will depend on whether domestic talent gets similar support, and whether the country’s science infrastructure can be reformed.
“The scheme sendsastrong signal that the Chinese government values talented people from overseas and welcomes their contribution in key areas of research development,” says Zhanqing Li, an atmospheric scientist at the University of Maryland in College Park.
The plan, announced this month by the country’s top personnel administration, targets people with full professorships or the equivalent in developed countries. It offersarelocation package of 1 million renminbi (US$146,000) per person, with salaries and research funding left to universities and institutes to sort out.
Previous approaches — such as the Chinese Academy of Sciences’ one-hundred-talents scheme and the education ministry’s Yangtze River Scholar Scheme — have lured more than 4,000 researchers, mostly at postdoctoral or assistant-professor levels, back to the country in the past fifteen years.
The new scheme “wouldn’t have worked justafew years ago”, says Muming Poo,aneuroscientist at the University of California, Berkeley, and director of the academy’s Institute of Neuroscience in Shanghai. But given pressures on funding in the developed world, China can offer researchers comparable, if not better, support.
Read more: http://www.nature.com/news/2009/090128/full/457522a.html
မျိုးသိဏ်း	| ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ရောက်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြန်လာခွင့်ရရှိရေးအတွက် လွှတ်တော်တွင် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာနှင့် ပတ်သတ်၍လည်း တင်ပြသွားမည်ဟု ဦးသိန်းညွန့်က မနေ့က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“မနက်ဖြန် လွှတ်တော်ထဲမှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံခြား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဒဏ်ခတ် ဥပဒေတွေရုပ်သိမ်းဖို့ ကိစ္စတွေ မနက်ဖြန်လုပ်မှာပါ။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဥပဒေဆိုတာ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတွေ ဗမာပြည်ပြန်လာဖို့အတွက် လုပ်တာပါ။” ဟု ဦးသိန်းညွန့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“လွှတ်တော်ထဲမှာ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေ နည်းနေတာကတော့ ဦးဝင်းတင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့သူတွေရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ မဟာဗျူဟာကြောင့်ပေါ့။” ဟု ဦးသိန်းညွန့်က ဆိုသည်။
“သင်္ကန်းကျွန်း ၅ (က) ရပ်ကွက်က ဆင်းရဲသားတွေကို ထောင် ၄ လချတဲ့ အမှုမှာ အဌမအကြိမ် တရားသူကြီး ညီလာခံမှာ အရင်တရားသူကြီးချုပ် ဦးသိန်းမောင် ပြောခဲ့တာကို ကိုးကားပြီးတော့ ‘တရားကို မတရားလုပ်ရင်၊ မတရားတာကို တရားတယ်လုပ်ရင် တိုင်းပြည်ပျက်မယ်’ လို့ ကျနော်ပြောခဲ့တာကို တရားရုံးကို မထေမဲ့မြင် ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ ရှေ့နေကျင့်ဝတ် ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့လိုလုပ်တာ ကျနော့်ကို လိုင်စင် ပိတ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့တုန်းက အန်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ရွှေက နယက ဥက္ကဌဆီကို ကန့်ကွက်စာပို့ခဲ့ပါတယ်။”ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ကဗျာဆန်ဆန် ပြောရရင်တော့ဗျာ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ အလွမ်းအိပ်မက်တွေကို ပုံစံတမျိုးနဲ့ ကျနော် ဖော်လိုက်တာပါပဲ။”
တကယ်လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့ ..
အမိမြန်မာပြည်က အိုမင်းနေပေမယ့် မိခင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ နွေးထွေးနေဆဲပါ …
မြန်မာပြည်ကို ..အမိလို့ ဘယ်သူကစခဲ့တယ်တော့ မသိ..တော်တော်ကြာပြီလို့ ထင်ရပါတယ်..။
ဆိုတော့.. ဒါက ပထမအကြိမ်လွတ်လပ်ရေးရပြီး .. အမိက အသက်ကြီးလာတယ်ဆိုပါတော့..။
အဲဒီမှာ .. ဧရာဝတီနဲ့ရပြီး မွေးလာတဲ့သားတယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပါတော့..။ တဦးတည်းသားဆိုတော့ ..မိခင်မေတ္တာအပြည့်ရတာပေါ့..။
အဲဒီသားက .. အခု ကျုပ်တို့ မျိုးဆက်မှာ ..အဖဖြစ်သွားပြီဆိုပါစို့..။
အဲဒီတော့ .. ၂၁ရာစုမှာ ..အဖမြန်မာပြည်..
သူတို့လုပ်တာ ၁၀၀% မှန်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၉၈၈ လိုပြန်အဖြစ်စေခံမလား။ NLD နိုင်ယင် လွှတ်တော်မခေါ်ဘဲ တစ်ခုခု လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံး ၁၀နှစ်လောက်အချိန်ဆွဲမယ်။ အခု၎နှစ်ကို NLD လူကြီးတွေ စောင့်ကြည့်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ စစ်အစိုးရမဟုတ်ဘဲ။ လွှတ်တော်အစိုးရ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် NLD အနေနဲ့ ပို လှုပ်ရှားရ လွယ်မယ်လို့ မျှော်လက်ံရပါတယ်။ ၄နှစ်လောက်ကို အပြင်ကနေစောင့်ကြည့်ပြီး နောက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ခြင်းကပိုသင့်တော်ပါတယ်။
၅ နှစ်သက်တန်းလို့ မှတ်မိတာပဲ..။
သမ္မတက .. ၅နှစ် ၂ကြိမ်သက်တန်းပဲရွေးခံခွင့်ရှိတယ်..။ ဆိုတော့ .. အခုလိုမပြုတ်မခြင်း ဆက်ရှိ.. ..အာဏာရှင်ကြီးတွေတော့ မဖြစ်တော့တာသေချာပါတယ်..။
လွန်လှ ၁၀နှစ်မှာ တယောက်လဲရမှာပဲ..။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ဒီတခေါက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ .. ၀င်မပြိုင်တာတော့ ..မှန်တယ်ထင်ပါတယ်..။
၀င်ပြိုင်ရင်..နိုင်ကောင်းနိုင်နေမှာဖြစ်ပြီး..နိုင်ရင်.. ပြသနာတွေတောက်လျှောက်တက်ဦးမှာမို့ ပါ..။
အခုတော့ .. ပြည်တွင်းမှာပဲနေ.. ပြည်ပရောက်အင်အားတွေပြန်စု.. နောက်၅နှစ်ကို စောင့်ပေါ့..။
ကံကောင်းရင်. .နောက်၅နှစ်မှာ .. ယူအက်စ်လိုပဲ.. လွတ်တော်ထဲ… အတိုက်အခံပါတီကြီး၂ခုထဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်..။
အဲဒီလို နဲ့ ..အပြန်အလှန်ထိမ်းညှိသွားရင် ..မြန်မာပြည်တိုးတက်မှာပဲ..။
ဦးသိန်းညွှန့်ခင်ဗျား.. လွှတ်တော်ထဲမှာကမဲ့ ရုပ်သေးပြဇာတ်ထဲမှာ ဘယ်နေရာက ပါဝင်အသုံးတော် ခံဖို့ရှိပါသလဲ။ ကိုယ့်အမှားကိုယ်မမြင်သေးရင် အန်အယ်ဒီဆိုတဲ့ နာမည်ကို မသုံးသင့်တော့ပါ။
လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးမရသစ်ကို မျှော်မနေနဲ့ဗျ။ လည်ပင်းကြီး တတောင်လောက် ရှည်ထွက်လာမယ်။ သူတို့ကသာ စစ်မှန်တဲ့၊ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းတဲ့ လိုက်လျောမှုမျိုး ပြခဲ့ရင် မန်းဂေဇက်မန်ဘာတွေ ရထားတဲ့ ပွိုင့်တွေကို တပွိုင့်တဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ လဲပေးလိုက်မယ်။
ဘယ်လဒူလဲကွ ငါမန်းထားတာကို မကြိုက်ဘူးပေးတာ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အေးအေးရေခဲတိုက်ထဲမှာ သွားနေစမ်းပါ။ ကြောက်တတ်ရင် စားဖားတွေ၊ ပုတ်သင်ညိုတွေ၊ လင်းတလိုကောင်တွေ ပို့ပေးလိုက်မယ်။
လုပ်ကြပါအုံးဗျို့ ကျုပ်ရေးထားတဲ့ ကွန်းမန့်ကို thumb down တွေလုပ်ထားလို့ ပျောက်ရပါတော့မယ်။ မိတ်ဆွေဒီမိုသမားများ thumb up လေးဝိုင်းတင်ပေးကြပါအုံး။ တခါထဲ ခြံစည်းရိုးပေါ်ခွထိုင်တဲ့ သဂျီးကိုပါ ဝိုင်းဝန်းနှိပ်ကွပ်ကြဖို့ ဆော်ဩပါယ်။
ပါတီရှိနေမှ နိုင်ငံရေးတွေလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာရှိနေရမှာက မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓါတ်ပါပဲ၊အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူတိုင်းမှာ မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ဇွဲ၊သတ္တိတွေပဲလိုပါတယ်။အမှန်တရားတွေအတွက် အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးကြသူတိုင်း အမြဲတမ်းစည်လုံးညီညွတ် နေကြဖို့ လိုအပ်ပါသည်ဟု တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံ ရေး တော့ သိပ် နား မလည် လို့ မဝေဖန် တော့ပါ။
လွတ်တော် မကျင်းပခင် 30th January, 2011 နေ့ တွင် မြန် မာ ပြည် အနှံ့ အပြား မိုးများ အုံ့ ဆိုင်း လျက် လွတ်တော် စတင် ကျင်းပသော 31st January, 2011 တွင် အချို့ နေရာများ ၌ မိုး များ ပင် ရွာ ခဲ့ပါကြောင်း….။
မူဘာရခ်ကို ဆန့်ကျင်သူ အင်အားစုများ အားကောင်း လာပြီး၊ စစ်တပ်က ပထမဆုံးအကြိမ် ဆန္ဒပြသူတွေကို မပစ်ဘူးလို့ ကြေငြာလိုက်သည်။ စစ်တပ် လူထုဘက် ပါသွားတဲ့အတွက် အစိုးရက ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်များနဲ့
စကားပြောဖို့ ချက်ချင်း ကမ်းလှမ်းလိုက်သည်။
ဦးနု… ၆၂မှာအာဏသိမ်းခံရပြီးထိမ်းသိမ်းခံရ..အဲဒီကထွက်တော့ … မြန်မာပြည်ကထွက်တော့ …သူနဲ့အတူ တပ်တွေကလည်း အားပေးတောခိုတာရှိတယ်..။ ယိုးဒယားဆို ..လက်ခံပြီးဘန်ကောက်မှာ အခိုင်အမာ နေရာတောင်ပေးတယ်.။ အိန္ဒိယကလည့်း်နောက်ရော ရှေ့ ရောက အပြည့်ထောက်ခံတယ်..။ တရုတ်ကတော့ ..အဲဒီတုံးက ..ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်အနိုင်နိုင်..။
ဗကပနဲ့တင် ပြည့်နေပြီ…။ သဘောက ..ဦးနေ၀င်းတို့ကို .. ချဖို့ပဲချောင်းနေတဲ့နိုင်ငံပေါ့..။
အဲ..ကုလသမဂ္ဂဆိုတာကြီးမှာတော့. အတွင်းရေးမှုးချုပ်လုပ်နေတဲ့သူက … ဦးသန့်ဖြစ်ပြီး .. ဦးသန့်က ..ဦးနုကောင်းမှုနဲ့ .. ကုလအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဖြစ်လာသူဆိုပါစို့..။
ဦးနုကို .. ကုလသမဂ္ဂက အတွင်းရေးမှုးချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်.. အသေအလဲကိုထောက်ခံတာပေါ့..။
နောက်ပြီး.. သူနဲ့သူ့ပါတီက … ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအနိုင်ရယုံတင်မဟုတ်… နိုင်ပြီးတက်ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့သူ…။ အာဏာကို သိမ်းပြီးလုခံရတာ..။
အင်္ဂလန်ကနေတောင် ၀န်ကြီးချုပ်အာဏာကို ဦးနေ၀င်းဆီက ပြန်တောင်းဖူးတယ်..။
ဦးလောယုံရဲ့… နေးရှင်းသတင်းစာဆိုတဲ့ မီဒီယာကြီးလည်း သူ့ဖက်ကရှိတယ်..။ နိုင်ငံအပြင်မှာအခုထိတောင် ခိုင်ခိုင်ရပ်တည်နေသေးတဲ့..ပါတီလည်းရှိတယ်..။ သားတွေသမီးတွေလည်း ..အရွယ်ရောက်ပြီအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ရှိတယ်..။
သူ့ခမြာ..အပြင်ကနေ ..လုပ်ရင်း..အော်ရင်း.. လုပ်တော့ … နောက်ဆုံးလုံးပါးပါးပြီး .. လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်ပါတယ်..။
မြန်မာပြည်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်း ..ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ကိုတော့ မပြောတော့ ပါဘူးနော..။
သူသေတာတောင် မြန်မာပြည်မှာပဲသေတာပါ..။ သူသေတဲ့ ဈာပနမှာတောင် .. လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ခဲ့သေးတာပဲ..။
တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ပေးချင်လို့ရှိရင် .. မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး..လုပ်ကြဖို့ပါပဲ..။ နိုင်ငံရေးသမားဆို့.. အက်တစ်ဗစ်စ်တို့ဆို ပိုသေချာတာပေါ့..။
စီးပွားရေးသမားကတော့ … အဝေးကလုပ်လည်း ရနိုင်ပါတယ်.။ ဒါပေမဲ့.. တိုင်းပြည်ကို ငွေတွေဝင်စေချင်ရင်တော့ .. အရင်းအနှိးတွေတိုက်ရိုက်မြုတ်နှံပြီး .. ပြည်တွင်းပြန်လုပ်သင့်တာပေါ့..။
တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင် .. တိုးတက်စေချင်ရင်.. ပြန်ကြဖို့ပါပဲ..။ ပြန်လုပ်ကြဖို့ပါပဲ..။
အာဏာရတဲ့အစိုးရကလည်း .. ပညာတွေ..။အရင်းအနှီးတွေ ဦးနှောက်တွေ..။အတွေ့အကြုံတွေ .. အချောင်ပြန်ရချင်ရင် ..ပညာရှင်တွေကို ကော်ဇောနီနဲ့ခင်းခေါ်ပေးဖို့ပါပဲ..။
တကယ်လို့ ..တခုခု ချွတ်ချော်ခဲ့ရင် .. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က .. ဒီနှစ်ထဲ.. မတရာအသင်းကြေငြာခံရနိုင်ပါတယ်..။
အဲဒီလိုဆို … နိုင်ငံအပြင်ကနေ ..ဒို့တွေဆက်လုပ်ကြမယ်ဟေ့လို့တော့ ..မတွေးကြစေလိုလို့ပါ..။
ခြံစည်းရိုးမခုန်ကြစေလိုပါကြောင်း… ခြံစည်ရိုးအလယ်ကနေ ..ဟိုဖက်ဒီဖက်မြင်နေရတဲ့ .. မီဒီယာသမားအနေနဲ့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါကြောင်း…။
ကိုင်း မြန်မာပြည်ကနေ အဝေးလွင့်သွားသော သို့ တခြားနိုင်ငံသားဖြစ်သွားသော မြန်မာများအားပြန်လာစေချင်ရင် နှစ်နိုင်ငံသားစနစ် ကျင့်သုံးလိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ အခွန်စနစ်လဲ ပြောင်းပေးဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။ သူတို့ကတော့ ဒီအကြံ ကိုလက်ခံဖို့ မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် win-win situation ဖြစ်သွားအောင် ၂ နိုင်ငံသားခံယူတဲ့သူက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မရှိဘူး။ သမ္မတ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ မဲပဲပေးလို့ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ။ ဝေဖန်ကျဗျာ။
Dual citizenship ကအခုမြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ဆို လိုအပ်တယ်ထင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူပဲကြည့်။ သူတို့စရိတ်နဲ့သူတို့ ထရိန်းလုပ်ထားပေးတဲ့.. မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအပါအ၀င် ပညာရှင်တွေ သိန်းချီရှိနေတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ၂ခုအတွင်း မြန်မာ သန်းချီပြီး မြန်မာပြည်ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်..။
အများအားဖြင့် စွမ်းအားရှိတဲ့ အသက်အရွယ်တန်းတွေ..။
ဒီလူတွေကို ပြန်အသုံးပြုနိုင်ရင် တိုင်းပြည်အကျိုးရှိမှာပဲ..။
ဒါတွေကဥပဒေပြုပြီး.. စာရွက်တွေနဲ့ ထုတ်ပြန်ပေးရုံပဲ.။
တိုင်းပြည်အနေနဲ့ .. ရမှာက .. လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကောင်းတွေလေ..။
ကိုခိုင်တို့ ၊ ဦးကြောင်တို့ ကရောပြန်လာမှာ မို့လို့လား။
ဒီစာကို ရန်ကုန်။ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်။ မြေနီကုန်းက .အင်တာနက်ဆိုင်မှ တင်ပါသည်ဆိုပြီး ..အထောက်အထားပြရမှာလားဟင်…။
ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ရောက်ရင် ..မန္တလေးဂေဇက်ကို ရန်ကုန်မှာ ရုံးထိုင်ပြိး ထုတ်ဖြစ်မှာပါ။ ဒီမှာလုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ .. စာစောင်ကိုအခမဲ့ပေးပစ်မှာ..။ စာရေးတဲ့သူတွေကိုလည်း ကြော်ငြာကရတဲ့အကျိုးအမြတ်အကုန်ခွဲပေးဦးမှာ..။
ပြည်ပရောက်မြန်မာများ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် လွှတ်တော်၌ တင်သွင်း
ဧရာဝတီ Friday, 04 February 2011 18:53
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) ပါတီမှ အနိုင်ရထားသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ပြည်ပ ရောက် မြန်မာများ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပြုလွှာ တစောင်ကို ယမန်နေ့က နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသော လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။
ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေနှင့် ပြည်တွင်းသို့ ပြန်သည့်အခါ ဥပဒေ ပုဒ်မများဖြင့် အရေးယူ မခံရ အောင် ဥပဒေကြောင်းအရ တင်သွင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးသိန်းညွန့်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ပြန်လာတဲ့ လူမှန်သမျှကို အရင်ပစ်မှု တခုခုနဲ့ ကျူးလွန်တယ်လို့ စွပ်စွဲချက်တွေ အားလုံးဟာ အကျိုး မသက်ရောက် စေရဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
လွှတ်တော်က အဆိုပြုလွှာကို စိစစ်၍ လက်ခံကြောင်း ကြေညာပါက အဆိုတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထောက်ခံမည့် သူများ လည်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကြောင်း ဦးသိန်းညွန့်က ရှင်းပြသည်။
“အဲဒီမှာ ကျနော်ပြောရမယ့် အချက်တွေကတော့ ဥပဒေ အကြောင်း ပြောမှာဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့ လက်ခံလို့ ရှိရင်လည်း လုပ်လို့ကိုင်လို့ အရေးကြီးတာ ထောင်တံခါး ပွင့်ဖို့အတွက် အဓိက ကျနော် ကြိုးစား သွားမယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဦးသိန်းညွန့်သည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ တွင်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီမှ အနိုင်ရ လွှတ်တော် အမတ် တဦး ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်က ဦးသိန်းညွန့်အပါအဝင် NLD အဖွဲ့ဝင်တချို့သည် NLD ပါတီမှခွဲထွက်၍ NDF ပါတီကို တည် ထောင်ခဲ့ကြသည်။
NDF ပါတီ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ၃ ဦးမှာ ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၊ ဦးခင်မောင်ဆွေနှင့် ဦးသိန်းညွန့် တို့ဖြစ်ပြီး ဒေါက် တာသန်းငြိမ်းနှင့် ဦးခင်မောင်ဆွေတို့မှာ လွှတ်တော်အမတ်များ အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ခဲ့ဘဲ ဦးသိန်းညွန့်မှာမူ ရန်ကုန် တိုင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Original Link: http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/news/5659-2011-02-04-11-54-06
ပြောစရာ ရှိတာ ပြောပြော ပြောပြော ×××ပြောပြီးတော့ ပြန်ပေါ့နော် ××××ပြောပြီးတော့ပြန်ပေါ့နော် ………
ငယ်တုန်းက အာလူလာပေးတဲ့ သယ်ရင်းတွေကို မခံချင်အောင် စတဲ့ တီဆျင်းလေ……..:P
oversea Burmese တွေ ပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ ဥပဒေကို ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုမှာပါ။ကျွန်မ တို့ batch ကဆိုရင် the whole burma top 10 တွေ အပါအ၀င် လူတော်တွေ အကုန် နိုင်ငံခြားရောက်နေကြပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်လောက်က ဖတ်ခဲ့တဲ့ အက်ဆေးတစ်ပုဒ်ကို သွားသတိရမိတယ်။ Brain drain ဆိုတဲ့ အက်ဆေးလေးပါ။ ဆိုလိုတာက ဦးနှောက် ယိုစီးမူပေါ့။ ကိုယ့်ဆီက လူတွေ နိုင်ငံခြား သွားပြီး အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်မလာဖြစ်ကြဘူး။ လာခွင့်မရှိလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် မလာချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အဲဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဦးနှောက်တွေ ယိုစီးမူ များနေတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပက်သက်ပြီး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါမှ ဦးနှောက် ယိုစီးမူ မဖြစ်မှာလေ။